HIDHAMAAFI AJJEEFAMAA BALBALA BILISUMMAA GEENYEERRA – Beekan Guluma Erena
HIDHAMAAFI AJJEEFAMAA BALBALA BILISUMMAA GEENYEERRA	Beekan Erena
Poems October 7, 2016Oromo Protests
106SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
Ummanni Oromoo Dhugaa namaa dabsuuf, haqa namaa sarbuuf qabsaawaa hin turre, qabsaawaas hin jiru, Oromoon haqa isaaf qabsaawaa ture. Haqa isaaf qabsaawaa jira. Kan dhiigni ilmaan Oromoo kumaa kitilaadhangalahaa jiru haqa ummanni Oromoo akka sabaatti dhabe deebisuufmalee akka iccitiin biraa hin jirre eenyufuu ifaadha. Qabsoon kun ammoo amma mirgi abbaa biyyumma, walqixummaa fi bilisummaan Oromoo kabajamutti kan itti fufu ta’uunis akkasuma ifaadha. Qabsoon keenya, qabsoon haqaaf , wal qixxummaaf, mirga abbaa biyyummaa keenya kabachiifachuuf taasifnu kun, akka argaa fi dhagahaa jirru baayyeen keenyas akkuma irrattis hirmaachaa jirru sadarkaan har’a irra jiru akkaan boonsaa fi abdachiisadha, diina rifaasisee lammii gammachiisaa jira. Dhiigni gootoota keenyaa, lafeen ilmaan Oromoo akka bade hin hafin ragaa bahaa jira. Injifannoolen gurguddoon galamaahaa, qabsoon keenya barootaaf itti dhiignee fi itti cabne firii naqachaa jira. Qayeen gabroonfattootaa, qayeen saamtootaa barbadaawaa fi dukkanaawaa qayeen Oromtichaa ammoo ifaa jira. Qayeen Oromoo saamtootaa fi ergamtoota irraa qulqullaawaa jira.
Har’a diinni keenya kan waggoota 25n darbaniif nu garoonfata fi nujjeesaa, kan nu hidhaa fi nu saamaa turte wayyaaneen FXG ummanni Oromoo gaggeessaa jiruun dhiphuu hamaa keessa jirti. Dhiphuu hamaa kanarraayis kaatee gutummaa Oromiyaa keessatti waraana ishii Aga’aazii bobbaaftee dhalataa Oromoo dhiiraa dubartiin , xiqqaa guddaan jumlaan fixaa jiri. Keessumaa erga FXG gutmmaa Oromiyaa keessatti finiinee ka’ee as wayyaaneen waraana ishii ajjeechaa muxeeffate aga’aazii bobbaaftee ajjeechaa fi dararaan raawwataa jirtu akka malee hammaateera. Baatilee 11n darban keessatti qofa osoo ajjeechaa jumlaa Hora Arsdiitti onkololeessa 2 bara 2016 raawwatte hin dabalatin namoota 1000 ol dhukaaftee fixxee jirti. Kan onkololeessa 2 bra 2016 hirmaatoota ayyana irreecjhaa irratti raawwatte ammoo akkaan sukanneessaa fi kan amma ammaatuu lakkoofsi isaa adda hin bahin yoo xiqqaate namoota dhibba 500 ol ta’uudha. Kan Ergasii asiyiis guyyaa guyyaan dhumaa jiran ilmaan Oromoo hanga hin qaban.Kanneen mana hidhaatti manakaraaraa jiran hayyoonni Oromoo danuudha. Biyyaa kan baqatan, kanneen bakka buuteen isaanii dhabame akkasuma manni haa lakkaawu. keessumaa yeroo ammaa kana gutummaa Oromoomiyaa keessatti duguuginsi sanyiiti wayyaaneedhaan ummataOoromoo irratti raawwachaa jira. Ajjeechaan jumlaa, Namoota ukkaamsanii essa buutee dhabamsiisuun akka sirnichaan akka fala
xumuraatti fudhatameera. Qabeenya Oromoo saamuunis kan yeroo kamiituu caalaa babbalatee jira. Walumaa galatti yareeoo ammaa kana sochii
wayyaaneen bara bittaa fi saamichaa dheereeffachuuf taasiftuu fi FXG ummanni Oromoo murna tanarratti gaggeessaa jiruun impaayeerri Itiyoophiiyaa dhiphuu hamaa keessa jirti jechuutu danda’ama. Ummanni Oromoo ajjeechaa, hidhaa fi darraaa akkasumas saamicha wayyaaneen barootaaf gaggeessaa jirtu kana ofirraa kutuuf fincilarra jira. Fincilli kun akkuma dirreetti muldhachaa jiru firii naqachaa saboota biraafuu fakkeenya guddaa ta’aa jira. Wayyaaneen waan qabduu fi gadi dhiiftu wallaaltee ajjeechaa jumlaa raawwchaa jirti, kan fagoo dhiifne ajjeechaa jumlaa nama nagahaan irreeffannaaf baheerratti dhukaasa banteen yakka sukanneessaa Bishooftuu Hora arsadee irratti onkoleessa 2 bara 2016 gaggeessitee yoo kaafnee ilaalle ammam akka badii kutatte ifatti muldhisa. Qarqara boollaa gahuu sirnichaa argisiisa. Qabsoon ummata Oromoo FXG egalle akka bara garbruummaa nurraa kutuuf dhihaate muldhisa. Osoo ajjeefamnuu .. osoo hidhamnuu akkuma eenyuyyuu ragaa bahuu danda;utti balbala bilisummaarra geenyeerra. Onkolooleessa 2 bara 2016 qeerroom dargaoonni kutatoon lammii isaaniif dhaabbatan, kan seenaan isaan hin daganne, waltajjii wayyaaneen irraa holooluuf qopheeffatte Bishooftuu Hora Harsadeetti argamuun daawoon daawoon TPLF, daawoon …wayyaanee jedhaniiru. Qabeenya diinaa gubuun, lukkeelee wayyaanee miseensoota OPDO fi kanneen biroo irratti tarkaanfiin WBO fi qeerroon fudhatamaa ergamtoonniis Oromiyaa keessaa baqachaa jiru. Kanneen akka Fayyisaa Leellisasaa fi atleetonni biroo ammo akkuma hunduu quba qabnu ennaa olompikii Riyoo
Dabalatee ennaa iddoo gara garaatti kaatanii injifatanii galanittidhugaa Oromoon qabu addunyaa hubachiisuun seenaa dalaganiiru. Dalagaas jiru. Kan sabboontoota Artiistoota Oromoo ammoo silaa lakkaawamee hin dhumu. Hawaasi Oromoo biyya alaas achittis lukkeeleen wayyaanee dhabamuu baataniis hojii deeggarsaa, hojii dippiloomaasii lakkaawwamee hin dumne raawwachaa jira. Walumaa galatti alaa-manatti qabsoon ummata Oromootin wayyaanee irratti gaggeeffamu cimeera, gara
balabala bilisummaatti kalaayeera. Caalaatti cimuus qaba. Akkuma “ ilkaan socho’e osoo hin buqqaane hin hafu” jedhamu san, sirni Wayyaanee buqqayee baduuf qaraqara gaheera. Mootummaan faashsitiin nufixaa bahee fi jiru kun sochiin isaa ammaa martuu sochii abdii kutannaa ta’uu ifatti mirkaneessaa jira. Haata’uutii dadhabaa jira, ykn dadhabee jira jennee daqiiqaaf of dagachuu hin qabnu, qabsoo keenya FXG bakkayyuttuu fininsinee itti fufuu qabana. Holola riifoormii jettee Wayyaaneen odeessitu kamuufuu gurra kennuuraayis of eggachuun akkaan barbaachisaadha. Alaa manatti irreen keenya tokko ta’ee qabsoo ummanni keenya irratti dhiigaa fi dararamaa jiru kana firii itti horuun dubbii Fardiidha! Kan gabrummaa jalaa nubaasee
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa106SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← THE GENOCIDAL MASSACRES OF OROMOS AT THE IRREECHAA FESTIVAL: THE LIES OF THE TIGRE-LED ETHIOPIAN GOVERNMENT Asafa Jalata, PhD The University of Tennessee
Re articulating the Oromo liberation objective is not consensus building By Rundassa Asheetee →